ဂွါတီမာလာနိုင်ငံ တောအတွင်းမှ ရှေးဟောင်း မာယာလူမျိုးများ ယဉ်ကျေးမှုများ တူးဖော်တွေ့ရှိ - Yangon Media Group
ဂွါတီမာလာစီးတီး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃
ဂွါတီမာလာနိုင်ငံပီတန်ဒေသ ထူထပ်သောတောအုပ်အတွင်း၌ ရှေးဟောင်းမာယာလူမျိုးများ၏ နေအိမ်များ၊ အဆောက်အအုံများ၊ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုစနစ်များနှင့် ပိရမစ်အဆောက်အအုံစသော သောင်းနှင့်ချီသည့် ရှေးဟောင်းအ ဆောက်အအုံများကို သုတေသီများက နည်းပညာမြင့်ခေတ်မီနည်းစနစ် များသုံး၍ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက် သတင်းများအရသိရှိရသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည် မြောင်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများကိုလည်း ယခုခေတ်ကဲ့သို့ ခေတ် ရှေ့ပြေးဖောက်လုပ်ထားခဲ့သည်ကို တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ယင်းသတင်းကို အမေရိကန်၊ ဥရောပနှင့် ဂွါတီမာလာရှေးဟောင်းသုတေသန အဖွဲ့ကပူးပေါင်းကာ ဂွါတီမာလာနိုင်ငံ မာယာယဉ်ကျေးမှုနှင့် သဘာဝဖောင် ဒေးရှင်းအဖွဲ့မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်က သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မာယာယဉ်ကျေးမှုခေတ်မြေ နိမ့်လွင်ပြင်ဒေသ၌အကြမ်းအား ဖြင့် လူဦးရေ ၁ဝ သန်းခန့် နေထိုင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်ဟု သုတေသီများက သုံးသပ်ယူဆထားသည်ဟု တူလိန်းတက္ကသိုလ်မနုဿဗေဒဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပါမောက္ခမာစယ်လိုအေကနူတိုက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။ သုတေသီများသည် မာယာခေတ်အား LiDAR ခေါ် အလင်းထောက်လှမ်းစနစ်သုံးစွဲကာ ဖြန့်ကြက်မြေပုံထောက်လှမ်းစနစ်ဖြင့် ယခုကဲ့သို့တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ မာယာယဉ်ကျေးမှုခေတ်အတွင်း မာယာလူမျိုးများသည် ယခင်ကတွေးတောယူဆထားသည်ထက် ပိုမိုÓဏ်ရည်ကောင်းမွန်ကာ ထူးချွန်သူများဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆက်လက်ပြောကြားလိုက်သည်။
”စိုက်ပျိုးရေးမှာလည်း ဆည် မြောင်းစနစ်ကို သုံးစွဲထားတာမို့ စားရေရိက္ခာပေါများစွာ ထွက်ရှိနိုင်ခဲ့တာလည်း သုတေသနပြုတွေ့ရှိရပါတယ်”ဟု နယူးယောက်မြို့ အီသာကာကောလိပ်မှ မနုဿဗေဒ လက်ထောက် ပါမောက္ခသော မတ်စ်ဂါရီဆန်က ထုတ်ဖော်ပြော ဆိုလိုက်သည်။ ယင်းဒေသအားမာယာမြေပုံ အရ စတုရန်းမိုင် ၈၁ဝ (စတုရန်း ကီလိုမီတာ ၂၁ဝဝ) တူးဖော်ကာ ဘီစီ ၁ဝဝဝ မှ အေဒီ ၉ဝဝ ကြား ထွန်းကားခဲ့သော မာယာယဉ်ကျေးမှုအား လေ့လာနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြေပုံအရအဆောက်အအုံ ၆ဝဝဝဝ အားတွေ့ရှိကာ ယင်းတို့၌မာယာ လူမျိုးများ၏အခမ်းအနားစုရုံး ကျင်းပရာနေရာများ၊ ဈေးများနှင့် ပိရမစ်များ ပါဝင်လေသည်။ မြို့တွင်းလမ်းများဖောက်လုပ်ထားမှု စနစ်တကျတွေ့ရှိရသော် လည်း နှောင်းလူများ၏ လယ်ယာထွန်ယက်စိုက်ပျိုးမှုများကြောင့် မာယာခေတ်လမ်းများပျက်စီးနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ကြရသည်။
အစိုးရ၊ လွှတ်တော်နှင့် ပါတီ ညီညွတ်စွာ ရုန်းကန်ရမည့် အချိန်ရောက်ပြီ ဟုဆို
ဆူနာမီ ကာကွယ်ရေး လေ့ကျင့်နေသည်ကို ခလုတ်မှားနှိပ်သူက တကယ့်ရန်သူက တိုက်ခိုက်ပြီဟု ထင်ခဲ့ြေ??
ရေသန့်ဘူးကို ကန်ထုတ်ခဲ့သောကြောင့် အမ်မရီကို အက်ဖ်အေ စွဲချက်တင်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် ခရီးသည်တင် ကူးတို့သင်္ဘော တိမ်းမှောက်၊ လူနှစ်ဦးသေဆံ?
အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၁) သန်းခန့် ရှိသည့်အနက် ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် ထင်း၊ မီးသွေးလောင်စာအတွက် သစ?
မန်စီမြို့နယ်တွင် ဘိန်းဖြူ ဆပ်ပြာခွက်များနှင့် စိတ်ကြွဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရမိ